Kanpetlet – Travel Chin State
ကန်ပက်လက်မြို့သည် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး ချင်းပြည်နယ်၏ အမြင့်ဆုံးတောင် ခေါ်နူးစုမ်(နတ်မတောင်) အမျိုးသားဥယျာဉ်ကြောင့် လူသိများပါသည်။ ကန်ပက်လက်တွင် သဘာဝနှင့် ထိတွေ့ခွင့်ရနိုင်ရန် အခွင့်လမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ တောင်တက်လမ်းတလျှောက်တွင် သဘာဝကို လေ့လာ သင်ယူနိုင်ပါသည်။ ခေါနူးစုမ် တောင်တွင်သာ တွေ့နိုင်သော ရှားပါးငှက် မျက်ခုံးမွှေးဖြူ ငှက်ပြာခြောက်ကို ကြည့်ရှု လေ့လာရန် ငှက်ကြည့်သမားများလည်း လာရောက်လည်ပတ်ကြပါသည်။ တောင်ဇလပ်ပန်း နှင့် တိမ်ပင်လယ်ကို ကြည့်ရှု ခံစားလိုသော ပြည်တွင်းခရီးသည် အများဆုံး လာရောက် လည်ပတ်ကြသော မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကန်ပက်လက်မြို့ကို လောက်နူးမြေဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပါသည်။
Na yat ta mä!
[ Na yat ta ma o ]
Na yat sua ka mä?
[ Na yat sua ki ma o ]
Hngin i khgü na yoi yang mü?
[ Hinekhuu na yuae yang ma o ]
Ho ba ka thët kha?
[ Hoy boae ka thit khai ]
Na gung tua
[ Na gung taw ]
Am bä ni
[ Am boi ni ]
[ Na boi ni ]
ခေါ်နူးစုမ်ပြခန်းသည် ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပက်လက်မြို့၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၊ မြို့ပတ်ကားလမ်းအနီး ဒိုင်း(ရ်)ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ခရီးသွားများ ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ချင်းရိုးရာအမွေအနှစ်များထုပ် ဖော်ပြသနိုင်ရန် (၂၀၁၇ခုနှစ်)တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤပြခန်းတွင် နှာခေါင်းဖြင့် ပုလွေမှုတ်သော အဖွား(ဒေါ်ဘွေ့ထန်း) နှင့် အဖိုး(ဦးထန်းနိုင်း)တို့မှ ရိုးရာသံဇဉ်များဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေခြင်း၊ ချင်းရိုးရာပစ္စည်းများအား လေ့လာခြင်း၊ မတူကွဲပြားသော ချင်းရိုးရာဝတ်စုံများဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း နှင့် ရိုးရာမြှားပစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခံစားနိုင်ပါသည်။
” ကောလောင်း”ရေတံခွန်သည် ကန်ပက်လက်မြို့မှ ၃မိုင် ၅ဖာလုံခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး (၃)နာရီခန့် ခြေလျင်လမ်း လျောက်သွားနိုင်သကဲ့သို့၊ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဖြင့်လည်း လွယ်လင့်တကူ သွားရောက်လည်ပတ် အပမ်းဖြေနိုင်ပါသည်။ Trekking ကိုစိတ်ဝင်စားသည့် ခရီးသွားများအတွက် လမ်းတစ်လျောက်တွင် အုတ်ဖိုကျေးရွာ၊ မကျောက်အားကျေးရွာတို့ကို ဖြတ်၍ သွားရသဖြင့် ဒေသခံချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့များ၊ ချင်းလူမျို့တို့၏ ရိုးရာအိမ်ဆောက်ပုံဖြစ်သော ခြေတံရှည်အိမ်လေးများ၊ ရိုးသားပွင်.လင်း၍ ဗျူငှါသော ဒေသခံတို့၏ အပြုံးများနှင့် မတူကွဲပြားသော ဘာသာစကားများကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် လေ့လာခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လမ်းတစ်လျောက် လှပသောသဘာဝရှုခင်းများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့၏ စိုက်ခင်းများ၊ တောပန်းမျိုးစုံ နှင့် လိပ်ပြာလေးများကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကောလောင်းရေတံခွန်သည် ကန်ပက်လက်မြို့သို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခရီးသွားများအတွက် ခေါ်နူးစုမ်တောင်တက်ခရီးစဉ်ပြီးလျင် ဒုတိယ စိတ်ဝင်စားမှု အများဆုံးခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခြေလျှင်ခရီးဖြင့်သွားပြန် ၆နာရီခန့် ကြာမြင့်သော်လည်း လမ်းမလျောက်နိုင်သော ခရီးသွားများအတွက် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဖြင့် အလွယ်တကူသွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လည်ပတ်သူများအနေဖြင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းချိန်သွား/ပြန် ၄၀မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ပါသည်။